25. Uyini umsebenzi kaMoya oNgcwele? Ubonakala kanjani umsebenzi kaMoya Ongcwele? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Lapho uMoya Ongcwele enza umsebenzi wokukhanyisela abantu, ngokuvamile ubanika ulwazi lomsebenzi kaNkulunkulu, nolokungena kwabo kweqiniso nesimo seqiniso, futhi uphinde abanike ukuxazulula, abavumele ukuba baqonde inhloso kaNkulunkulu yangempela nalokho akufuna kubantu namuhla, uMoya Ongcwele ubanikeza ukuxazulula ukuvula yonke indlela. Ngisho noma abantu bebhekene nokuchitheka kwegazi nomhlatshelo kumele benzele uNkulunkulu, futhi ngisho noma bebhekana nokushushiswa nobunzima, kumele baqhubeke bathande uNkulunkulu, futhi bangazisoli, futhi kumele baqhubeke bafakazele uNkulunkulu. Ukuzimisela okunjalo ukushukunyiswa uMoya Ongcwele, nomsebenzi kaMoya Ongcwele—kodwa yazi ukuthi awunakho ukushukumisa okunjalo ngaso sonke isikhathi. Ngezinye izikhathi emihlanganweni ungazizwa ushukumiseka kakhulu futhi ukhuthazekile futhi udumise kakhulu futhi udanse. Uzizwa sengathi unokuqonda okukhulu kakhulu ngalokho abanye abafakaza ngakho, uzizwa umusha ngaphakathi, futhi inhliziyo yakho iphelele ngaphandle kwanoma yimuphi umuzwa wokungabi nalutho—konke lokhu kuhambisana nomsebenzi kaMoya Ongcwele. Uma ungumuntu oholayo, futhi uMoya Ongcwele akunikeza ukukhanyiselwa nokukhanya okungavamile lapho uyokwenza umsebenzi webandla, okukwenza ube qotho, ube nesibopho futhi uqiniseke emsebenzini wakho, lokhu kuhambelana nomsebenzi kaMoya Ongcwele.
Kucashunwe embhalweni othi “Ukwenza (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Umsebenzi kaMoya oNgcwele ikakhulukazi ujwayelekile, futhi ngenkathi esebenza kubantu basaqhubeka nokuba nezinkinga, basakhala, basahlupheka, basebuthakathaka, futhi kusekuningi okungabacaceli kahle, kodwa kulesi simo bayakwazi ukuzinqanda ekuhlehleni kuNkulunkulu, futhi bamthande uNkulunkulu, futhi yize bekhala futhi becindezelekile ngaphakathi, basakwazi ukumdumisa uNkulunkulu; umsebenzi kaMoya oNgcwele usengojwayelekile kakhulu, futhi awuwona neze ongamandla angajwayelekile. Abantu abaningi bakholwa ukuthi, uma uMoya oNgcwele eqala nje esebenza, izinguquko ziyenzeka ezimweni zabantu bese izinto ezibalulekile zisuswe kubona. Leyo yinkolelo edukisayo. Uma uMoya oNgcwele esebenza ngaphakathi kumuntu, izinto ezikhombisa ukunganaki zomuntu zisekhona kanti nesimilo sakhe sisuke sisefana, kodwa ngenkathi ethola ukukhanya nokukhanyiseleka kukaMoya oNgcwele, ngakho-ke isimo sakhe siyaguquka, izimo zangaphakathi kuyena ziba ngezijwayelekile, futhi ashintshe ngokushesha.
Wonke umsebenzi woMoya oNgcwele ujwayelekile futhi uyiqiniso. Uma ufunda amazwi kaNkulunkulu futhi uthandaza, ngaphakathi uzizwa uphapheme futhi ugxilile ungena kuzanyazanyiswa, umhlaba ongaphandle awukwazi ukugxambukela kuwe, ngaphakathi uzimisele ukuthanda uNkulunkulu, uzimisele ukuhlanganyela nezinto ezinhle, futhi uyawuzonda umhlaba omubi; lokhu ukuphila ngaphakathi kukaNkulunkulu. Akukhona ukuzijabulisa kakhulu, njengoba abantu besho—inkulumo enjalo ayilona iqiniso.
Kucashunwe embhalweni othi “Indlela Yokwazi Iqiniso” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Kwesinye isikhathi, uma uthokozela amazwi kaNkulunkulu, umoya wakho uyathinteka, bese uba nomuzwa wokuthi akukho ukwenza ngokunye ngaphandle kokuthanda uNkulunkulu, uzwe ukuthi kunamandla amakhulu ngaphakathi kuwe, nokuthi ayikho into ongeke ukwazi ukuyiyeka. Uma uzizwa kanjena, kusho ukuthi uthintwe uMoya kaNkulunkulu, kanti nenhliziyo yakho nayo isiphendukele kuNkulunkulu ngokuphelele, futhi uzobe usuthandaza kuNkulunkulu uthi: “O Nkulunkulu! Ngempela samiselwa futhi sakhethwa nguWe. Inkazimulo yaKho ingenza ngiziqhenye, kunginika intokozo ukuba ngomunye wabantu baKho. Ngizolahla konke nginikele ngakho konke ukuze ngenze intando yaKho, futhi ngizonikela ngayo yonke iminyaka yami, nayo yonke imizamo yokuphila kwami konke, kuWe.” Uma uthandaza kanje, inhliziyo yakho izoba nothando olungenamkhawulo nokulalela uNkulunkulu ngeqiniso. Wake wahlangabezana noma waba nomuzwa ofana nalona? Ngokuvamile uma abantu bethintwa uMoya kaNkulunkulu, bavame ukufisa ukuzinikela kuNkulunkulu ngemikhuleko yabo: “O Nkulunkulu! Ngifisa ukubona usuku lwenkazimulo yaKho, futhi ngifisa ukuphilela Wena—akukho okudlula noma okunengqondo ukudlula ukuphilela Wena, futhi angifisi nakancane ukuphilela uSathane nenyama. Ungiphakamisele ukuthi ngikwazi ukuphilela Wena namuhla.” Uma uke wathandaza ngale ndlela, uzozwa ukuthi awukwazi ukwenza ngokunye ngaphandle kokuthi unikele inhliziyo yakho kuNkulunkulu, ukuthi kumele uzuze uNkulunkulu, nokuthi ngeke uthande ukufa ungazange umzuze uNkulunkulu ngesikhathi usaphila. Uma usuthandaze ngale ndlela, uzoba namandla angapheli ngaphakathi kuwe, futhi ngeke wazi nokuthi aqhamukaphi; enhliziyweni yakho kuzoba namandla angenamkhawulo, futhi uzokuzwa ukuthi uNkulunkulu uthandeka kakhulu, nokuthi ufanelwe ukuthandwa. Lesi yisona sikhathi ozobe uthintwe uNkulunkulu ngaso. Bonke labo abake bahlangabezana noma baba nalo muzwa bathintwe uNkulunkulu. Kulabo abavame ukuthintwa uNkulunkulu, izimpilo zabo ziyashintsha, bayakwazi ukwenza izinqumo zabo futhi bayafisa ukuzuza uNkulunkulu ngokuphelele, uthando lukaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo luba namandla, izinhliziyo zabo ziphendukele kuNkulunkulu ngokuphelele, abanandaba nomndeni, abanandaba nomhlaba, abanandaba nezinto ezibathandelile, noma ikusasa labo, futhi bafisa ukunikela imizamo yempilo yabo yonke kuNkulunkulu. Bonke laba abathintwe uMoya kaNkulunkulu bangabantu abafuna iqiniso, futhi abanethemba lokupheleliswa nguNkulunkulu.
Ungaba yisiwula, futhi kungebe nomehluko phakathi kuwena, kodwa uMoya oNgcwele kumele asebenze ukuze kube nokholo kuwena, ukuze uhlale uzizwa ukuthi awukwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokwenele, ukuba wena uzimisele ukubambisana, ukuzimisela ukusebenzisana noma ngabe zinkulu kangakanani izinkinga ezingaphambili. Izinto zizokwenzeka kuwena futhi ngeke kucace kuwena ukuba ziqhamuka kuNkulunkulu noma kuSathane na, kodwa uzokwazi ukulinda, futhi ngeke ube ngongagqize qakala noma ongenandaba. Lona ngumsebenzi ojwayelekile kaMoya oNgcwele. Uma uMoya oNgcwele esebenza ngaphakathi kubona, abantu basahlangabezana nezinkinga zangempela, kwesinye isikhathi bayakhala, futhi kwesinye isikhathi kuba nezinto abangakwazi ukuzinqoba, kodwa konke lokhu kuyisikhathi esijwayelekile semisebenzi kaMoya oNgcwele. Yize noma bengazinqobi lezo zinto, futhi yize noma, ngaleso sikhathi, bebuthakathaka futhi bekhononda, emva kwesikhathi basuke besakwazi ukumthanda uNkulunkulu ngokholo oluphelele. Ukunganaki kwabo angeke kubavimbe ukuba babe nokuhlangenwe nakho okujwayelekile, futhi kungakhathalekile okushiwo ngabanye abantu, nokuthi babahlasela kanjani, kodwa basuke besakwazi ukuthanda uNkulunkulu. Ngesikhathi somkhuleko, ngaso sonke isikhathi bazizwa sengathi bayamkweleta uNkulunkulu, bese bezimisela ukuba bamenelise uNkulunkulu bayehlule inyama uma bephinda bebhekana nezinto ezinjengalezi. Lawa mandla akhombisa ukuthi kunomsebenzi kaMoya oNgcwele ngaphakathi kubona, futhi lesi yisimo esijwayelekile somsebenzi kaMoya oNgcwele.
UNkulunkulu akawuphindi umsebenzi Wakhe, akawenzi umsebenzi ongenangqondo, akazenzi izimfuneko eziyihaba ngomuntu, akawenzi umsebenzi ongaphezu komqondo womuntu. Wonke umsebenzi awenzayo awukho ngaphezu komqondo womuntu, awubudluli ubuntu obujwayelekile, futhi umsebenzi Wakhe uvumelana nezimfuneko zomuntu. Uma kuwumsebenzi kaMoya oNgcwele, umuntu uba ngojwayelekile nakakhulu, futhi ubuntu bakhe buvama nakakhulu. Abantu bazuza ulwazi olukhulayo ngesimo sabo esonakele esinobusathane, nangesiqu somuntu, futhi ulilangazelela kakhulu iqiniso. Lokho kusho ukuthi, ukuphila komuntu kuyakhula, futhi isimo esonakele somuntu sibhekana nezinguquko eziningi—konke lokho kuyincazelo kaNkulunkulu eba ukuphila komuntu.
UMoya oNgcwele unendlela okumele ayihambe kumuntu ngamunye, futhi unika umuntu ngamunye ithuba lokupheleliswa. Ngokubuka izinto ngendlela engenhle wenziwa ukuba ubone inkohlakalo yakho, bese kuthi uma ulahla lokhu kungabuki kahle uthole indlela yokwenza; lezi yizo zonke izindlela opheleliswa ngazo. Futhi, ngokuqhubeka nokuqondiswa kanye nokukhanyiswa kwezinto ezithile ezinhle ezingaphakathi kuwe, uzokwazi ukuthi ugcwalise umsebenzi wakho futhi ukhule ngolwazi uphinde uzuze ukuqonda. Uma izimo zakho zizinhle, uzimisela ngokukhethekile ukufunda izwi likaNkulunkulu, futhi uzimisela ngokukhethekile ukukhuleka kuNkulunkulu, futhi uyakwazi ukuthi izintshumayelo ozizwayo uzibhekise esimweni sakho. Ngezikhathi ezinjalo uNkulunkulu ukukhanyisela futhi akukhanyise ngaphakathi, akwenze ubone izinto ezithile zohlangothi oluhle. Lena yindlela opheleliswa ngayo ohlangothini oluhle. Ezimweni ezimbi, uzizwa ubuthakathaka futhi kungekho ofuna ukukwenza, uzizwe sengathi awunaye uNkulunkulu enhliziyweni yakho, kodwa uNkulunkulu uyakukhanyisa, akusize ukuba uthole indlela okumele wenze ngayo. Ukuphuma kulokhu kuwukuthola ukupheleliswa ohlangothini olubi.
Ngezinye izikhathi uNkulunkulu ukunika uhlobo oluthile lomuzwa, umuzwa okwenza ulahlekelwe yinjabulo yakho yangaphakathi bese ulahlekelwa ukuba khona kukaNkulunkulu, futhi ube sebumnyameni. Lolu wuhlobo lokucwengwa. Noma nini lapho wenza into ethile, ihlala ingahambi kahle, noma ufike kwangqingetshe. Lokhu ukuqondisa kukaNkulunkulu. Kwezinye izikhathi, lapho wenza into enokungalaleli nephikisa uNkulunkulu, kungase kungazi muntu—kodwa uNkulunkulu uyazi. Ngeke akudedele, futhi uyokuqondisa: Umsebenzi kaMoya oNgcwele unemininingwane kakhulu. Uwahlolisisa ngokukhulu ukucophelela wonke amazwi nezenzo zabantu, ukwenza nokunyakaza kwabo, nayo yonke imicabango nemiqondo yabo ukuze abantu bakwazi ukuziqaphela ngaphakathi lezi zinto. Lapho wenza into ethile kanye ingahambi kahle, uphinde uyenze futhi ingahambi kahle, kancane kancane uyowuqonda umsebenzi kaMoya oNgcwele. Ngezikhathi eziningi zokuqondiswa, uyokwazi ukuthi kufanele wenzeni ukuze uhambisane nentando kaNkulunkulu futhi uyokwazi lokho okungahambisani nentando Yakhe. Ekugcineni, uyosabela ngokunembayo esiqondisweni sikaMoya oNgcwele ngaphakathi kuwe.
Okwedlule: 24. Uyini umehluko phakathi kwenceku enhle nenceku embi?
Okulandelayo: 26. Umuntu angawuthola kanjani umsebenzi kaMoya oNgcwele?